Zeziphi izinto ezisetyenziswayo zecingo lobushushu obuphezulu abicah?
Abicah ucingo lobushushu eliphezulu uneqondo lobushushu eliphezulu kakhulu kunye nobushushu aphantsi ukumelana, yokusebenza egqwesileyo zombane usambathiso, uzinzo ogqwesileyo imichiza, ukumelana ombane aphezulu, ukuxhathisa ukwaluphala, kunye nobomi inkonzo ende. Kwaye ithambile kwaye kulula ukuyifaka. Abicah ucingo lobushushu eliphezulu h ...
Uyintoni umahluko phakathi kwendibano yekhebula kunye nentambo yokubopha
ngomphathi ku 20-09-26
Ukubiyelwa kombane yimithambo kunye nenxalenye efihliweyo yamashishini amaninzi. Ezi zinto zibiyelweyo zibalulekile kuba ziyawaxhasa amashishini anjalo ukuze aqhubeke nenkqubela phambili. Umzi nawo udinga iingcingo okanye iintambo ukuze ufumane umbane ukuze usebenzise izixhobo zombane kunye nezinye izixhobo zombane ....
Intshayelelo kulwazi olusisiseko lweentambo zokubopha i
Uthotho lwentambo yokuBopha 1. Intambo yokubopha: Isetyenziselwa ukudibanisa iingcingo ezimbini okanye nangaphezulu ezinamacandelo okuhambisa izinto ezikhoyo okanye imiqondiso. Inokwenza lula inkqubo yendibano yeemveliso ze-elektroniki, kulula ukuyigcina kunye nokuphucula, kunye nokuphucula ukuguquguquka koyilo. Isantya esiphezulu kunye nokufakwa kwamanani kwikhompyuter kwitra ...
I-Cable Assembly. Intambo yokubopha Amagama athi "indibano yekhebula" kunye "neentambo zokubopha ngocingo" zihlala zisetyenziswa ngokungafaniyo. Ngapha koko, amagama athi "intambo" kunye "nocingo" nawo asetyenziswa ngokungafaniyo. Kodwa, le yeyomntu olele yedwa. Iingcali kunye nabo bazi malunga nobuchwephesha bala macandelo, zonke iiths ...
Izihlanganisi ze-rness kunye neeTheminali - Ukwenza ukhetho oluchanekileyo Intambo yokubopha intambo licandelo eligcina iintambo zombane ezifanayo ezihambisa imiqondiso okanye amandla; iingcingo zibotshwa kunye ziiteyiphu zombane, imijelo yamanzi, umtya, okanye okunjalo. Kodwa, ezi ntambo zokubopha ucingo aziloncedo ukuba ...
Xa sicinga ngokuvelisa kwi-21st Century, sibonisa oomatshini abazenzekelayo bekhupha ngokukhawuleza iimveliso ezintsha ngokulula. Ke kutheni le nto inkqubo yokuveliswa kwentambo yokubopha ingabinakho ukuzenzekelayo nayo? Ukuphendula lo mbuzo, kufuneka singene ngaphantsi ...
Intambo yokubopha intambo yenzelwe ukwenza lula ukwenziwa kwento enkulu, kwaye iyilelwe ngokusekwe kwiimfuno zejiyometri kunye nezombane zezixhobo ekufuneka ifakwe kuyo. Iihadi zeengcingo zihlala zisetyenziswa ...
Olink Ukuthatha inxaxheba kuMboniso